पोखरा महानगरपालिकाको अर्मलाकोट गाउँमा कटुवाल प्रथा कायमै | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(November 16, 2019)
जेठ ११, २०७६ शनिबार २०:२२:२१ | सुमन गुरुङ
कास्की – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ अर्मलाकोट गाँउमा अझै पनि कटुवाल प्रथा कायम छ । गाउँमा कोही नयाँ पाहुनाको उपस्थित हुँदा होस् या भेला बैठक र सरसफाइको कार्यक्रममा गाउँमा सूचना पुर्‍याउने काम कटुवालले नै गर्छन् ।
अर्मलाकोटका ४७ वर्षिय शेर बहादुर परियारले गाउँमा हुने सार्वजनिक सूचनालाई समुदायमाझ पुर्‍याउने काम गर्नुहुन्छ । गाउँका कटुवाल रहनुभएको परियारले गाउँमा हुने कामको सार्वजनिक रुपमा सूचाम प्रवाह गर्दै आउनुभएको छ । पोखरा महानगरको सबै भन्दा उच्च भूभागको गाउँ हो अर्मलाकोट गाँउ । यो गाउँ सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा भने छैन ।
गाउँमा विद्युत, मोबाइल, टेलिभिजन रेडियो लगायतका सञ्चारका सबै सुविधा भए पनि चलिआएको परम्परागत कटुवाल प्रथा कायमै रहँदा परियारलाई भ्याइनभ्याइ भएको हो ।
कटुवालको कामलाई ‘घोक फिराउने’ भनेर समेत बुझिन्छ । ६०/६५ को हाराहारीमा घरधुरी भएको अर्मला गाउँमा हुने भेला, सार्वजनिक कार्यक्रम, पूजाआजा, विद्यालयको बैठक हुँदा, असिना पर्दा, विवाह हुँदा, मानिसको मृत्यु हुँदा अनि गाँउको होमस्टेमा पाहुना आउँदा सूचना पुर्‍याउने काम कटुवालको हो । ‘गाउँ अलि धेरै क्षेत्रमा फैलिएकाले एक ठाँउबाट मात्र घोक फिराउँदा नसुनिएला की भनेर ४ ठाँउमा गएर घोक फिराउँछु’ उहाँले भन्नुभयो ।
कटुवालको काम गरेवापत उहाँ बर्षमा प्रत्येक घरबाट २ पाथी कोदो पाउनुहुन्छ । गएको २ वर्षदेखि यो काम गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । ‘पहिला बाले यो काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि ३ जनाले काम गरेपछि मेरो पालो आयो’ उहाँले भन्नुभयो । अर्मलाकोट टोल विकास समितिका अध्यक्ष सिंहबहादुर परियार वा कोषाध्यक्ष जसबहादुर गुरुङ्गले निर्देशन दिएपछि उहाँले सबै गाँउलेलाई सूचना सम्प्रेषण गर्दै आउनुभएको छ ।
२ वर्ष अघिसम्म अर्मलाकोट गाँउमा कटुवालको काम डिलप्रसाद जैसीले गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँको स्वरमा समस्या आएपछि टोल विकास समितिकै निर्णयमा उहाँले काम थाल्नुभएको हो । जैसी भन्दा अगाडि सिंहबहादुर परियार, काजीमान नेपाली र शेर बहादुरका बुवा कृष्णबहादुर परियारले कटुवालको काम गरिसक्नुभएको छ ।
गाउँमा रेडियो, टीभी अनि मोबाइल भए पनि कटुवालले घोक फिराएपछि आफूहरुलाई विश्वास लाग्ने स्थानीय ५५ वर्षीय देउसरी गुरुङले बताउनुभयो । “गाँउमा बैठक भयो भने फोन त आउछ तर कटुवालले सुनाएपछि बल्ल ढुक्क हुन्छु” उहाँले भन्नुभयो । गाँउमा मोबाइलको टावरले समस्या पर्ने भएकाले पनि कटुवालको आवश्यक परेको अर्मलाकोट होमस्टेकी अध्यक्ष बबिता गुरुङ्गले बताउनुभयो । परम्परादेखि चल्दै आएको चलनलाई जोगाएर राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
गाँउमै कटुवालको काम गर्न पाउँदा परियारलाई पनि खुशी लागेको छ । ‘नजिकका अरु गाँउमा कटुवाल प्रथा छैन यो प्रथालाई जागाएर राख्नुपर्छ भनेर लागेको छु’ उहाँले भन्नुभयो । परियारले प्रत्येक घरबाट दिने २ पाथि कोदोले जिविकोपार्जन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । परियारले भन्नुभयो, ‘सुविधा थपिए काममा सहज हुने थियो ।’
कटुवाललाई प्रथा नभएर पेसा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वडाबाट केही सहयोग भयो भने यो पेसा पनि जोगिने र आफूलाई पनि जिविको पार्जनमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तिम अपडेट: कात्तिक २५, २०७६
फर्निचर उद्योगको निर्माणधिन भवनमा बम विस्फोट
हरि गुरु को अवसानसँगै परिवारमा ऋणको सकस
नगर प्रोफाइल निर्माण सुरु
प्रधानमन्त्री ओलीकाे प्रेस सल्लाहकारमा सूर्य थापा
कात्तिक २९, २०७६ शुक्रबार
उपमेयर खड्गीको टाेलीले लगायाे गुठीकाे जग्गामा बनेका टहरामा ...
एक जनाको आँखाबाट चार जनालाई दृष्टि : यस्तो छ नानी प्रत्यारोपण...
मंसिर पहिलाे साता अष्ट्रेलियामा नेपथ्य गुञ्जिने
आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतकाे आदेश
बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद स्वदेश प्रस्थान
नेपाललाई ऐतिहासिक उपाधि दिलाउने भलिबल टोलीका सदस्यलाई ३-३ ...
यू–१९ च्यालेञ्जर्स ट्रफी : भारतको ब्लू टिमसँग दुई विकेटले पराजित
अब नेपालमै मेसिनबाट मानसिक रोगको उपचार !
पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटीलाई ‘इन्जा साहसी पत्रकारिता पुरस्कार’
आलममाथिकाे थुनछेक बहस सकियो, केही बेरमा आदेश आउने
सवारी नियम मिच्ने चालकलाई खादा र फूलका गुच्छा !
रामेछापमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयद्वारा दुई जलविद्युत आयोजना...
'फिलिपिनो लिम्बुनी'को कथा : घर बिर्तामोड, माइती फिलिपिन्स ! (भिडियाेसहित)
यसरी छुट्याउन सकिन्छ महाकालीको नक्कली र सक्कली मुहान !
महिला भलिबलमा नेपाललाई ऐतिहासिक उपाधि